Ku qasbo shabakadaha inay u hoggaansamaan MacOS Catalina's Safari mugdiga Mode | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Ku qasbo shabakadaha inay u hoggaansamaan MacOS Catalina's Safari mugdiga Mode
Ku qasbo shabakadaha inay u hoggaansamaan MacOS Catalina's Safari mugdiga Mode
Waxaan joojiyay akhrinta qoraal cad oo asal madow ah markii aan dugsiga ka baxay, weligayna ma jeclayn tan iyo markaas. Gaar ahaan muraayadda, halkaasoo bannaanka madow uu noqdo muraayad madow oo ka tarjumaysa wax kasta oo aragiisa ah. Laakiin xitaa waxaan doorbidaa Mode mugdiga habeenkii, marka aan rabo inaan akhriyo aniga oo aan dhibin dadka kale.
Dhibaatadu waxay tahay, shabakado badan ma taageeraan Mode mugdiga ah. Wax kasta oo kale oo ku yaal Safari waxaa lagu soo bandhigay madow dhadhamin leh, laakiin bogga laftiisa ayaa weli loo sameeyay caddaan dhalaalaya. Si farxad leh, ugu yaraan Mac, waxaa jira hab lagu saxo. Waa kuwan sida loogu qasbo shabakad kasta inay taageerto Safari Dark Mode ee Mac.
Ahhhh. Si nasasho leh.
Sawirka: Alex Denk
Habka Madow ee Safari waa kordhinta Safari ee ay Apple ku taliso kaas oo ku qasbaya Mode mugdiga goobaha aan taageerin. Halkii ay bogaggu ka lahaan lahaayeen caddaan dhalaalaysa marka ay raran yihiin, waxay ku furmi doonaan caddaan-madow nasasho leh.
Sida Mode mugdiga ah ee Mac kaaga intiisa kale, hawlgalka kordhinta waa la jadwalsan karaa. Waxaad ku dhaqaajin kartaa gacanta, ku socodsii jadwal aad dooratay, ama u dejin kartaa si aad u dhaqaajiso mar kasta oo Mojave/Catalina's hooyo Madow uu shaqeeyo.
Sida loo isticmaalo Habka mugdiga ah ee kordhinta Safari
Daar kordhinta dookhyada Safari.
Awood-siinta kordhinta Habka Madow ee Safari ma fududayn karto. Kaliya kala soo bax kordhinta Mac App Store, oo ka daar Safari's Waxa aad rabtid. Bogga doorbidida waxa laga helayaa Safari, hoostiisa Safari shayga bar menu. Fur, dhagsii Extensions tab, oo guji calaamadee sanduuqa Kordhinta Habka Madow.
Kordhintan waxtarka leh ayaa ka dhigaysa mareegaha sida xun u dhaqma.
Waxaad kala dooran kartaa saddex mawduuc oo mugdi ah - Madow, Soft Dark iyo Mono - sidoo kale waxaad liis gareyn kartaa boggaga si ayan si toos ah u madoobaanin.
Qaabka Madow ee Safari, oo ka socda horumariyaha Denk Alexandru, wuxuu u muuqdaa mid lama huraan u ah qof kasta oo isticmaalaya Mojave ama Catalina's Mode mugdiga. Ma jiraan wax odhanaya "hirgelinta nus-qiimaynta ah" sida bogga mareegaha dhalaalaya ee ka soo baxaya miiskaaga dhayalsan. Apple waxay dooratay inaysan ku dhisin tan, laakiin waxaad ku dari kartaa kaliya $2.
Download: Habka Madow ee Safari ee App Store (macOS)
Waa maxay sababta Amazon ay u soo dirayso liiska fasaxa?
Toolbox Pro wuxuu keenaa khiyaamo cusub oo cajiib ah Jidadka gaaban